एनआरएनए एउटा संस्था कि क्लब ?
- भरत सापकोटा -
गैरआवासीय नेपाली संघलाई यहाँसम्म ल्याउन संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको योगदान अविस्मरणीय थियो। महतोको दूरदृष्टि र लगनशिलताको गल्तिले आज सिमित व्यक्तिहरुले यस संस्थालाई क्लबमा रुपान्तरण गर्न कसरत गरेर सबल हुने बाटो खोजिरहेका छन। संस्थाको तीन कार्यकाल नेतृत्व सम्हालेका महतोको कार्यकालपश्चात् एन.आर.एन.ए. को अस्तित्व सकिन लागेकै हो त भन्ने विदेशवासी नेपाली समक्ष चर्चाको बिषय बन्न पुगेको छ।
हरेक खेलहरु खेलिने तौर तरिकाहरु आ-आफ्नै छन्। एक दशक अगाडि नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरुलाई लक्षित गरी उदय भएको संस्था एन.आर.एन.ए. अहिले धनीमानी कोच बसी नेपाली खेलाडीमार्फत् खेलिने खेलका लागि “एन.आर.एन.ए” क्लब बनाउन पुगेको आम विदेशबासी नेपालीहरुलाई थाहा नभएको पनि होइन।
सन् २००३ अर्थात् आज भन्दा एक दशक अगाडी यूरोप प्रान्तमा सिमित व्यक्तिहरुबाट खेल्न लागिएको यो खेल अहिले आएर बिश्वका हरेक प्रान्तमा गरि करिब ६ दर्जन देशहरुको हाराहारीमा खेल्न थालिसकेको छ। नेपालको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्दता जारी गर्दै १० बर्ष देखि अरबौंको लगानी भित्र्याएर देश बिकाश गर्छौं भन्ने गफ लगाए। सरकारी रकममा भोज खाई दशैँ मनाउनका लागि सम्मेलन गरे जस्तो नाटक देखाउँदै कुर्सिको लागि खेल खेल्छन्।
त्यतिमात्र नभएर राजनीतिक पार्टीको प्यानल बनाई चुनाव लड्दै अबिर जात्रा गर्छन्। यदि यहाँ पनि चरम राजनीति नै हुने हो भने एन.आर.एन.ए. को पछाडि एउटा राजनीतिक बिल्ला भिराउनु नितान्त जरुरी किन ठानिएन त? के छ त एन.आर.एन.ए. को अस्तित्व ? के हो त एन.आर.एन.ए. को दायित्व ? अनि के गर्दै छ एन.आर.एन.ए. ले ? यदि एन.आर.एन.ए. आम देश-विदेश बासी नेपालीहरुका समस्या र भैपरी आउने आपत बिपत समाधान गर्न स्थापित सामुहिक चौतारी संस्था हो भने किन दोहोरो नागरितामा नै सीमित छ त एन.आर.एन.ए ?
विदेशमा रहेका नेपालीहरुको सबैभन्दा ठुलो संस्था ठान्ने यस एन.आर.एन.ए. ले यो पनि जान्न जरुरी छ कि आखिर किन जन्मिदै छन् त विदेशमा दशैंका जमरा सरी अनेकौ समाज र गठबन्धनहरु? को हुन त यसको जिम्मेवारी लिनेहरु? छैनन् जिम्मेवारी लिनेहरु भने आम विदेशवासी नेपाली जनशक्तिले किन चुन्यो त लाखौ-लाख नेपालीको नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्ति र कार्यसमिति ? आम नेपालीहरुले यस्तो गरिमामय पदको लागि व्यक्ति चुनेर संस्था सम्हाल्ने अधिकार प्रदान गरेको व्यक्तिगत ब्यापारिक प्रबर्दन गर्नका लागि पक्कै होइन होला र नगरियोस पनि। यो सामाजिक संस्था हो न कि कसैको ब्यक्तिगत मागी खाने भाँडो।
आज देशमा विपत्ति छ। दैवी प्रकोपले तहसनहस छ। कयौँ गाउँबस्ति जलमग्न भएर डुबानमा फँसेका छन् त कतै ओत लाग्ने छानोसँगै बगेका छन् ज्युँदै मानिसहरु। अनि पुरिएका छन् सिंगै बस्तीहरु परिवारसँगै। नागरिता बनाउन सदरमुकाम गएकाहरु घर फर्किन्छ तर देख्दैन आफ्नो घरबस्ति। अनि छैनन् ती बृद्ध बाबु-आमा, न त छन् श्रीमती लालाबाला। हामीहरु यहाँ बसेर सरकारले यसो गरेन उसो गरेन बाढीपीडितलाई केही गरेन भनेर तर्क कुतर्क गर्छौँ। हो, सरकारवालाहरुले गरेका छैनन्। देशमा जनता बिचल्लीमा पर्दा हेर्नुपर्ने दायित्व सरकारको नै हो। तैपनि हामी पनि नेपाली नै भएका नाताले पनि यस किसिमका तर्क कुतर्क गर्नुको कुनै तुक र हैसियत हामीमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
हामी एन.आर.एन.ए. हरुलाई त एउतै चिन्ता छ मात्र दोहोरो नागरिकताको। यस किसिमका हरेक दुःखद दैवी प्रकोपबाट धेरैले ज्यान गुमाए। यस दुःखद अकल्पनीय दैवी प्रकोपबाट भएको जनधनको क्षति तथा घाइतेहरुको उपचार, उद्दार तथा राहत तथा नेपालीमा आइपर्ने साना तथा ठूला दैवी विपत्तिको अवस्थामा विभिन्न किसिमले सहयोग गर्ने प्रतिबद्दता जनाएको एन.आर.एन.ए. खै त आज कहाँ लुकेर हेरिरहेको छ ? My sansar.com
भूपरिवेष्टित राज्यको कुनै अधिकार हुदैन? भारतले चाहदैमा नेपालमा नाकावन्दी गर्ने सक्छ ?
महिलाको स्तन नै भएन भने महिला सौन्दर्य त सकिहाल्यो नि
हुण्डीवालाको निसानामा अर्थमन्त्री डा.महत
अवार्ड कार्यक्रम मात्र होइन कलाकारलाई अवार्डले उच्च सम्मान मिल्नेछ - किरण प्रसाद अधिकारी